Pan Sint Aung
Photo - Pan Sint Aung
ယခုနှစ်အတွင်း အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဥပဒေသတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံ၁၈ခုကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်�
"အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းလို့ရတာတွေရှိသလိူ မရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လိုက်နာမှုမရှိတဲ့ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကို ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့လည်းတရားစွဲဆိုတာတွေရှိပါတယ်�
�� အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်"ဟု အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်း အလုပ်ရုံးနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်ကျော်ထွန်းပြောသည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် မေလအထိတရားစွဲဆိုဖြေရှင်းခဲ့သည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံ ၁၈ခုအနက် ငါးခုမှာအမှုပြီးပြတ်သွား၍ ကျန်၁၃မှုမှာဆက်လက်အမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှင် ၊အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှူများ၌လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံ၁၅ခုကိုလည်း ခံဝန်ထိုးခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အငြင်းပွားမှုများမှာ ဌာနခွင့်ပြုချက်မရှိ အဆိုင်းနှစ်ဆိုင်းသုံးဆိုင်းစနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်သေဆုံးခြင်း၊ အချိန်ပိုခိုင်းစေခြင်း၊ ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိ စက်ရုံပိတ်သိမ်းခြင်းစသည့် ကိစ္စရပ်များကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှုပြသနာများမှာ နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပျမ်းမျှငါးမှုအထိ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး အများစုမှာ လုပ်ခလစာနှင့်အချိန်ပိုကြေးပြသနာများ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန လှိုင်သာယာမြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိ ဦးသန်းထိုက်အောင်က ပြောသည်။
ယခုအခါ အစိုးရအနေဖြင့် ကလေးလုပ်သားပပျောက်အတွက် အမျိုးသားအဆင့်အထိလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
By Pan Sint Aung
Pan Sint Aung isajournalist who worked for one year at News Week. And than she worked for more than7years at Myanmar Post Journal as Senior Journalist. She wrote many articles and news about all sector but subsequently she was write Business sector as main subject. Now she is working at My Magical Myanmar asafreelance writer ."